Saraakiishii kormeerayaasha Imtixaanka oo kasoo baxay deegaanada Hir-Shabeelle – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Wararka lag helayo deegaanada Maamulka Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay sheegayaan in saarakiishii kormeerayaasha iyo ilaalinta Imtixaanka ee dowladda Soomaaliya u dirtay deegaanadaas ay guud ahaan isaga soo baxeen,kadib amarkii Madaxweynaha Maamulkaas Maxamed Cabdi Waare.
Magaalooyinka,Baladweyne,Jowhar, Balcad iyo Buulo-Burde ayaa la sheegay inay kormeerayaasha Imtixaanka ilaalinayay ay isaga soo baxeen,iyaga oo soo aaday dhinaca Magalada Muqdisho,waxaana Guddigaas Madaxweyne Waare uu ku eedeeyay inay ku fashilmeen ilaalinta Imtixaanka.
Kadib markii Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu ku dhawaaqay in la joojiyey Imtixaankii socday,sila markaana markale dib loo bilaabayo 27-ka Bishaan ayaa Madaxweyne Waare waxa uu ku amray guddiga ku sugnaa deegaanada Hir-Shabelle inay isaga baxaan.
Sidoo kale Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa Magacaabay Guddi ka kooban 11 xubnood,kuwaas oo ku howlan inay go’aan ka gaaraan cida qaadeysa imtixaanka deegaanda Hir-Shabeelle,balse aan la ogeyn in uu dhaqan geli doono.
Baraha Bulshda ayaa lagu faafiyey maadooyin ka mid ah Imtixaanka ay Sanadkaan qaadeysay Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya taas oo keentay in imtixaanka la joojiyo,waxaana ka dhashay banaanbax ay dhigeen qaar ka mid ah ardaydii laga joojiyay Imtixaanka.
Saraakiishii kormeerayaasha Imtixaanka oo kasoo baxay deegaanada Hir-Shabeelle added by admin on 17/05/2019